Shirka Wadatashiga Abaarihii ku dhuftey Somaaliya sannadihii 2016-2017 ayaa lagu qabtey Magallada Kismaayo ee Maamul Goballeedka Jubaland. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Shirka Wadatashiga Abaarihii ku dhuftey Somaaliya sannadihii 2016-2017 ayaa lagu qabtey Magallada...
Shirka Wadatashiga Abaarihii ku dhuftey Somaaliya sannadihii 2016-2017 ayaa lagu qabtey Magallada Kismaayo ee Maamul Goballeedka Jubaland.
Shirkaani oo lagu daraasadeynayey abaarahii 2016-2017 oo lagu qabtey magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qeyb galey masuuliyiin ka Socotay Wasaaradda Qorsheynta Xukumadda Federaalka Soomaaliya iyo Mamul Gobolled-yada dalka, waxaa si wadajir ah la isugu raacay sidii looga hortagi lahaa Raadadkii ay Reeben Abarahii Ku Dhuftey dalka, deegaannad ugu daran iyo in la helo macluumaadka xal u helidda iyo ka hortagga abaarta.
Wasaarada Qorsheynta Soomaaliya ayaa wadday muddooyinkii dambe uruurinta xogta la xiriirta saameynta abaarihii dalka ku dhuftay sannadkii dhammaadey iyo sannadkii ka sii horreeyey, si xal loogu helo sababaha ay abaarahaas u soo laa laabtaan, iyadoo lagu dabaqi doono sida looga hortagi karo abaarahaas.
Sidoo kale Daraasadka ayaa lagu qeexi doonaa Dhibaatatdii ka dhalatey, waxaana wacyigelin loo sameyn doonaa dadkii ay saameynta xooggan ku reebtay abaarta.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka degay Gaalkacyo
Next articleDegreeto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Dowlad Gobolleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu magacaabey guddoomiyaha cusub ee Maxakamadda Sare ee maamulkaasi iyo Xeer ilaaliyaha guud ee K/Galbeed oo markii ugu horeysay uu yeesho Dowlad Goboleedka K/Galbeed.